Banyere Anyị - Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd.
Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ agbakwunyere nke gụnyere imewe, mmepụta, ire ahịa na ịnyịnya igwe & igwe eletriki. Ụlọ ọrụ anyị dị na mpaghara Dongli nke Tianjin, n'akụkụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Tianjin Binhai, na naanị 30km site na ọdụ Tianjin na ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin, nwere ike inyere gị aka ịchekwa ụfọdụ ibu ụlọ.
Anyị nwere teknụzụ iri na abụọ nke ụlọ na nke mba ụwa gbasara igwe na igwe eletriki (gụnyere patent ọdịdị, patent model utility na patent mepụtara wdg) Anyị mepụtara ụdịdị 13 dị iche iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Karịsịa batrị zoro ezo nke anyị mepụtara n'onwe anyị, igwe eletriki igwe mpịachi mpịachi bụ ngwaahịa mbụ ụlọ na nke mba na ngwaahịa pụrụ iche n'ụwa.
E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2008, anyị gbara mbọ ịnye ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ ngwaahịa dị mma na ọrụ klaasị mbụ. Anyị tumadi na-emepụta ma na-ahazi igwe kwụ otu ebe ugwu & E-bike, igwe kwụ otu ebe & E-igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, igwe ịkwọ ụgbọ mmiri n'ụsọ osimiri, igwe ụmụaka, mpịachi igwe kwụ otu ebe & E-bike na etiti igwe na ihe ndị ọzọ. Anyị nwere ahụmịhe karịrị afọ 10 maka ịme igwe OEM & ODM maka ndị ahịa si mba ọzọ. Ụlọ ọrụ anyị nwere ebe omumu ihe nke anyị, ihe omumu eserese, na mkpokọta ogbako, ọ na -ekpuchi mpaghara mita 8000 ma enwere ndị ọrụ karịrị narị abụọ.
Chongqing ZhenYouJin Technology Co., Ltd, ọkachamara na -emepụta ebike nwere etiti moto na sistemụ ịnya ụgbọ ala zuru oke, na -ere ngwaahịa akara AQL na Europe, China, United States na South America. Kemgbe ntọala, anyị ewerela ịdị mma na ọrụ dịka igodo anyị. Daalụ maka ahụmịhe anyị sara mbara na ndị otu mmepe anyị nwere ihe karịrị ndị injinia 20 sitere na ụlọ ọrụ nke anyị na ndị na -ebunye anyị nwere mmekọrịta imechi emechi ogologo oge.
Ya mere, anyị na -enwe ike iwepụta ihe karịrị mkpụrụ osisi 150,000 nke pedal enyere igwe eletriki eletriki na sistemụ ịnya ụgbọ ala nwere ezigbo mma kwa afọ. Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa anyị niile na -agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa. Anyị ga -adabere na teknụzụ, ngwaahịa, onyinye na uru ọrụ iji hụ na afọ ojuju ndị ahịa zuru oke.
Anyị bụ ndị ahịa nke Chongqing ZhenYouJin Technology Co., Ltd.
N'ime afọ mmepe, olu mbupụ kwa afọ erutela nde dollar iri atọ na ndị mmekọ anyị na Japan, South Korea, Indonesia na mba ndị ọzọ dị na South East, Europe, South America, United States, Switzerland, Middle East na mpaghara ndị ọzọ.
Ndị ọrụ ụlọ na ndị si mba ọzọ tụkwasịrị anyịnya igwe anyị tụgharịrị. ngwaahịa ọhụrụ na -apụta na iyi na -adịghị agwụ agwụ. Iji kpuchido ikike nke ọgụgụ isi, anyị ga -enye ndị ahịa nọ na ngwaahịa ọmarịcha ngwaahịa.
Anyị na -atụ anya iwulite mmekọrịta ogologo oge na imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa n'ụwa niile dabere na ntụkwasị obi na uru ọ bụla. Anyị ji obi gị nabata gị na ụlọ ọrụ anyị!